सबै बोकाहरु गफ हान्दै बसीराको रहेछन हैन हाम्रो टोलमा केटीहरुको खडेरी लाग्यो कि क्या हो ? (भिडियो सहित ) – Complete Nepali News Portal
सबै बोकाहरु गफ हान्दै बसीराको रहेछन हैन हाम्रो टोलमा केटीहरुको खडेरी लाग्यो कि क्या हो ? (भिडियो सहित )
ScotNepal November 18, 2018
मेलिना राई र राज कुमारको स्वरमा डान्सिङ गीत ओए ओए केटी सार्वजनिक भएको छ । केटा र केटीको नोकझोक वाला यो गीतको भिडियो पनि त्यस्तैनै रमाइलो बनेको छ । शब्द , संगीत , अरेन्ज अनि भिडियो सम्पादन स्वयम राज कुमारको रहेको यो गीतमा अभिनय ठमेल बजार गीतबाट चर्चित अलिशा राई र दर्पण छायाँ , मंगलम जस्ता चलचित्र बाट चर्चा बटुल्न सफल पुष्प खड्काको रहेको छ । किर्तिपुरको बिभिन्न ठाउमा छायांकन गरिएको गीतको भिडियोलाई ज्ञानेन्द्र शर्माले छायांकन गरेका हुन भने निर्देशन राजिव समरले गरेका छन ।